Home Wararka Baladweyne: Taariikhda iyo Magaca MW Guudlaawe oo Maanta Miisaanka Saaran.
Baladweyne: Taariikhda iyo Magaca MW Guudlaawe oo Maanta Miisaanka Saaran.
Taariikhda iyadaa is qorta dadka qaar ayaa nasiib leh oo ay u timaadaa iyagoo fahamsan oo wax wanaagsan ku qoran kara dadkaas waxaa ka mid ah MW Cali Xuseen Guudlaawe. MW Guudlaawe waa inuu laba kala doortaa:
Inuu qorto taariikh xun oo uu magaciisa dilo oo uu tirtiro taariikhda wanaagsan ee uu ka sameeyey doorashooyinkii a isku haysteen ee Seneterada taas oo uu yiri aniga qabiilna u eedoobi maayo qofna u eedoobi maayo oo qiyaamaha dhinaca ii gali mayaan.
In uu gacantiisa ku qorto taariikh wanaagsan oo ay ummadda u aaydo keenina karta inuu berito uu noqdo hogaamiye dalka iyo dadka u hiilliyey oo uu sameeyo wax dalka iyo dadka u wanaagsan, loogua abaal guda inuu qabtao xilalka muhiimka ah ee qaranka.
MW Guudlaawe waxaa maanta hoostiisa la rabaa in laga sameeyo wax dhaawacaya mustaqbalkiisa siyaasadeed iyo noloshiisaba waayo Fahad nin abaal u galayna uma gudin, ruux uu ka awood badan yahana uma naxariisan. Tusaale waxaa kuugu filan wixii ay ku faleen NN raggii u eedoobay maalintii ay inta isticaamaaleen sidii cinjirka galmada iskana tureen.
Aaway Muudey? Aaway Dhalxa oo lahaa astaan qaran ayaa madaxa la ii suray? Aaway Cali Yare? Oo cid waliba u caayey ? Aaway Cabdirashiid Sheekhaalow? Away xasan Cali Kheyre oo dhibkaan oo dhan isaga dhigay? Intaan iyo kuwa kale oo badan waxay noqdeen kuwa markii laga dhameystay la iska tuuray.
Marka taariikhdaas ha abuuranin maanta. Fahad waa nin la hubo cidda ugu horreysa ee uu dilayaa siyaasad ahaan iyo shakhsi ahaanba waa adiga. Inkastoo beesha weyn ee aad ka dhalatay ay ku fashilmeen inay sii akhrin karaan dhacdooyinka soo socda iyagoo kaashana wixii tagay iyo wax taagan oo ay mar waliba yiraahdaan “ Muxuu iga qaadayaa iyo ma isagaa sameyn kara sidaas?” qofkiina sidii loo sheegayey uu sameeyey.
Aan ku xusuusinno taarkiihda iyo falalkaa naxdinta leh ee uu leeyahay ninka maanta ay Somali marti kaaga tahay inaad joojiso iyo inaad ku soo deyso, kaas oo ah ruux sidii ari weer galay ay uga wada cabsanayaan shacbiga oo dhan –Fahad Yasiin Xaaji Daahir.
Waqtigan aan maqaalka qoreyno waxaa halkaan nagu dhow oo ah garoonka dayuuradaha ee Ugaas KHaliif uga socda:
Ergo uu wato loogu diiwaangelaanyo Garonka Baladweyne oo aan kaa fogeyn adna aa dog tahay.
Inay hawshaas u xilsaarana tahay Xamdi Isaq oo ah gabar guddiga ka tirsan oo wadata laba baabuur oo tikniko ah si ay ugu diinwaangelso Fahad ergadiisa, taas oo meel ka dhac adiga kugu ah. Xamdi oo ka tirsan guddi hoosaadka Genderka diiwaangelinta shaqo kuma laha adigana waad og tahay.
Waxaa laga wareejiyey xaruntii rasmiga ahayd ee guddiga doorashada waxaana loo raray halkaas adigoo Balateweyne jooga maadan diidin.
CID ayaa garoonka la geeyey sidoo kale waxaa qeyb ka ah AMISOM oo iyadana gef weyn, gaar ahaan Hiil Walaal oo maanta iyagan qoraya mid ka duwan taariikhda magaca weyn ee ay sameeyeen walaalaha Jibuuti iyo Hiilwalaal.
Waxaan Garoonka looga diyaariyey meeshii uu degi lahaa Fahad waana gef taariikheed oo aad ka galeyso beesha Reer Awxasan oo uusan xataa dhex imaan Karin.
Waxaan caalamka iyo Somalida u sheegeynaa inaad qeyb ka tahay dhibaatooyinka uu Fahad geysan doono waayo waxaa kaaga filan Fahad sidii uu u galay:
Ikraan Tahliil oo ilaa iyo hadda ku maqan gacanta hay’addii uu madaxda ka ahaa berrina ay ay suugal tahay inaad adiga ama ehelkaaga ay ku baxaan gacantiisa, hooyadeedna ay agtaada ku ooyeyeso sidii ay hooyadaa u ooyi lahayd hadaddii uu adiga gacanta kugu dhigi lahaa Fahad.
Wixii uu Marsiiyey Cabdullahi Nasri oo cid waliba oo iimaan iyo dadnimo leh ay ka calool gubaneyso weli iyo intii Godka ku soo arkay ay ka mid tahay Faadumo yar oo si joogto ah saf looga gali jiray.
Qalbi dhagax oo aad ogtahay tii lagu dhigay rabbi ayaa badbaadiyey laakiin waxa ay Fahad iyo kooxdiisa ku sameeyey adiga kaala gaban ma doonaan maalintey kaa lib helaan.
Dhinaca kale waxaa la hubaa in haddii Fahad la doorto, kaas oo uu socdo inuu noqdo G/K/1aad ee Golaha shacbiga kadibna uu xoog iyo jujuub ku marsiiyo in dib loo doorto Farmaajo in cidda ugu horreyso oo ay ka takhalusi doonaan waa Madaxweyne Guudlaawe,Saciid Deni, Axmed Madoobe iyo Qorqoor.
Haddaba maanta Madaxweyne kala dooro inaad taariikh mugdi ah gashid iyo inaad noqotid halyey qarankan ka badbaadiyey Ruux dilaa ah oo aad taarikhdiisa taqaanin oo berito yaan laguu qaadin “ Nabsigaad gashaa waa dambuu kugu gadootaaye, intaa waa ku daba gaambiyaa gaadhna ka yahay, gabbashuu dabeed kugu dilaa kuguna gaadaaye”. Umaadda Nabsi haka gelin ee Fahad Meesha ka saar.
Previous articleHogaanka ciidanka PSF ee garabka reer Diyaano oo ciidamo cusub qoranayo
Next articleColaadii deegaanka Harraale oo heshiis laga gaaray
DFS oo 26 Milyan ku bixineysa Gaadiidka Waaweyn ee Dagaalka loo...
Yuusuf Dabageed oo wali diidan in uu xilka wareejiyo